Published April 28, 2021 at 8:14 PM CDT
Deparmantiin mana fayyaa Dakota County akka ibsa baase karoora godheti talaalin corona virus clinic South Sioux City keessati kan kennamu guyyaa buriidha. Sclinic schedule kan godhes seati 2 hang 6p.m tti bakka El Ranchito Cornhusker drive birrati. Clinic kan bannameef jiraatota Nebraska fi Iowa kan ta’aniidha. Dura galmaahun kan gorfamu yoo tau garuu dirqamaa miti. Galamaahudhaf gara website vaccinate.ne.gov. deemu ni dandeesu.
Baayyinan Iowa keessati fedhiin talaali corona virus fudhachuu xiqqaata deeme jira, Governor Kimm Reynolds akka jetteti ogeeyyin fayyaa bakkeewan gabaa qonnaan bultoota fi bakka sport tti talaali kan akka kennan karoorfatani jiru. Jirattoni Iowa 65% hanga May fi parsantiin 75% hanga June talaala akka fudhachuu qaban governor karoorsite jirti. Parsantii 70% hanga 85% jiraattota naanichaatif ufirraa eegumsa gahaadha jedhani jiru. Jirattoni Iowa hanga guyyaa harbaa har’ati namni million1 yookin harki saddaffaa ummata talaali kana akka fudhatanii jiran himan.
Kun kanumaan osoo jiru, ogeessi fayyaa state bara 2020 keessa namni sababa opiod due percent 35 akka tae himan. Iowa surge mirror kan walii gala kan mullisuudha.
Wagga darbe keessa namni sababa opioid due nama 211 dha, kunis bara 2019 irraa 54 kan dabaleedha.
Gabaasni galmee Des Moines akka ibsitu virus kun dabaluuf sababa kan tauu dhabe ifa akka hin tain himan. Haatau malee, virus wajiin sababin walitti dhufeenya qaban adda bahu fi wal’aansa fayyaa kan nama gahan xiqqaachun dabalee kan tau akka tae himan.
Oromo News 04/27/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Dakota County keessati guyyaa kaleesa…